Na 2017 anyị ga - ahụ MacBook ọhụrụ dị ọnụ ala karịa yana ihe ruru 32 GB Ram | Esi m mac
Na 2017 anyị ga-ahụ MacBook ọhụrụ dị ọnụ ala karịa yana 32 GB nke RAM
Tọzdee gara aga, anyị gara ihe omume mgbasa ozi ikpeazụ nke Apple na 2016 nke lekwasịrị anya na ngalaba laptọọpụ nke ụlọ ọrụ ahụ, ọkachasị na ụdị ọhụrụ nke MacBook Pro nwere ụdị ọhụụ, Aka Ogwe na Touch ID agbanyeghị, ihe omume a pere mpe maka ọtụtụ ndị ọrụ tụrụ anya ọtụtụ akụkọ.
Ewezuga MacBook Pro, afọ 2016 gwụchara n’enweghị akụkọ dị mkpa gbasara MacBook retina, MacBook Air (belụsọ maka onwu nke 11,6-inch), iMac ma ọ bụ Mac Pro. O yiri ka na 2017 akụkọ ahụ ga-amalite ịbịaru, gụnyere nkwụsị dị mkpa.
1 N'afọ na-abịa, Apple nwere ike belata ọnụahịa maka MacBooks
2 Nweta nkwalite na 32GB RAM?
2.1 Kedu ihe kpatara MacBooks ugbu a anaghị akwado 32GB Ram
N'afọ na-abịa, Apple nwere ike belata ọnụahịa maka MacBooks
Abọchị ole na ole mgbe iwebata ụdị ọhụrụ nke MacBook Pro, onye nyocha KGI Securities nyocha Ming-Chi Kuo laghachiri amụma ya ma wepụta akụkọ nyocha ọhụụ ọ nwere ezigbo nchekwube banyere uto na MacBook, dị ka ya si kwuo, ga-anwale niile n'afọ ọzọ nke 2017.
Dị ka Kuo si kwuo, MacBook ndị ọhụrụ nke Apple ga-ebido na 2017 ga-enweta ọnụọgụ ego, na mgbakwunye na nwatakịrị melite nke ga-ekwe ka ohere nke nhazi na ihe ruru 32 GB nke Ram. Ma gịnị bụ Kuo na-adabere ịdabere na ịdọrọ ọnụahịa maka Apple's MacBook?
Dị ka onye nyocha a si kwuo, Apple gosipụtara ọchịchọ igosipụta ụdị ọhụrụ nke MacBook Air na MacBook Pro na ọnụahịa dị elu karịa ụdị ndị dị ugbu a, dị ka mmalite nke mbido mbelata ọnụahịa na-esote afọ. Dabere na ya Kuo na-eme atụmatụ na ọnụahịa ndị dị ugbu a bụ usoro nke ịkpụ ọnụahịa nke ga-eme na MacBook Pros nke a ga-emelite na ọkara nke abụọ nke 2017. Na mgbakwunye, Kuo kwenyere na ma usoro okike nke ngwaọrụ nwere njikọ USB-C na sọftụwia na-enye ohere iji ụlọ Bar Touch ọhụrụ mee ihe, ga-etolitela nke ukwuu, na-eme ka ndị ọrụ nwee mmasị dị ukwuu.
Nweta nkwalite na 32GB RAM?
N'ikpeazụ, Ming-Chi Kuo gosipụtara nke ahụ Apple ga-ewepụta mmelite na MacBook Pros na ọkara nke abụọ nke 2017 nke ga-agụnye nkwado maka 32GB nke RAM.. Agbanyeghị, Kuo dọrọ aka na ntị na nke a nwere ike ịdabere na Intel ịhapụ ndị nhazi Cannonlake n'oge.
(3) MacBook ohuru nke a ga - ewepụta na ọkara nke abụọ nke 2017 nwere ike inye nkwado maka 32GB DRAM, na-emesị na-adọta ndị ọrụ ndị ọzọ; nke a dabere na ma ụgbọ mmiri Intel ọ na - ebu Cannonlake CPU na oge na 2017, nke nwere 15-25% obere ike ike karịa LPDDR 4, ma e jiri ya tụnyere LPDDR 3. Ọ bụrụ na Cannonlake anaghị abanye na mmepụta oke dị ka atụ anya ya, ụdị ọhụrụ ewepụtara na ọkara nke abụọ nke 2017 ga-anakwere Kofi Lake, nke na-aga n'ihu na-anakwere LPDDR 3, na nkwado kachasị DRAM ga-anọgide na-agbanwe agbanwe na 16GB.
Kedu ihe kpatara MacBooks ugbu a anaghị akwado 32GB Ram
Dika edere ya na MacRumors, otutu ndi ahia gha ewe iwe site na eziokwu na MacBooks ohuru, ndi n’enye oru Skylake dịkwuo ike ịrụ ọrụ, nọgide na-arụ ọrụ ruo 16GB RAM, n'agbanyeghị na ọnụahịa dị elu karịa ụdị ọgbọ gara aga. Dịka ọmụmaatụ, MacBook Pro nke anụ ọhịa 13-inch na Touch Bar na-amalite na $ 1,799 na United States, $ 500 dị elu karịa ụdị ọgbọ gara aga.
Onye isi ahịa ahịa Apple Phil Schiller kọwara ihe kpatara nke a ji bụrụ onye na - agụ ya, David, si MacRumors. Dị ka ndị isi ahụ kwuru, maka Apple iji mee laptọọpụ nkwado maka ihe karịrị 16 GB nke RAM, ọ ga-eji sistemụ ebe nchekwa nke na-eri oke ike. Banyere ọnụahịa, Schiller kwuru na N'ajụjụ ọnụ na ịkwụ ụgwọ bụ "ihe dị anyị mkpa," mana na ụlọ ọrụ ahụ na-eji anya elee ahụmịhe, ọ bụghị ọnụahịa.
Kuo na-atụ anya ka ọnụ ahịa daa maka 2017 ọhụrụ na MacBook ndị dị adị dị ka MacBook 12-inch na MacBook Pro ọhụrụ.Ọ bụ ezie na o doghị anya ma ọ bụrụ na nkwado maka 32GB nke RAM ga-agbatịkwa na 12-inch MacBook.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Na 2017 anyị ga-ahụ MacBook ọhụrụ dị ọnụ ala karịa yana 32 GB nke RAM
PDF Editor Pro, n'efu maka obere oge
New beta macOS 10.12.2 dị maka nbudata